डेल्धुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच करोड बजेट सुनिश्चित « Globe Nepal
डेल्धुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच करोड बजेट सुनिश्चित
डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छ। जिल्लाको अजयमेरू गाउँपालिका–१ पुइलेकमा बन्ने विमानस्थल निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुनिश्चित भएको हो। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनसँगै विमालस्थल निर्माणका लागि पाँच करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए।
२०७० सालबाट डडेल्धुरामा विमालस्थल निर्माणका लागि विभिन्न प्रयास भएका थिए। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनसँगै पाँच करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेकोले अब छिट्टै डडेल्धुरामा विमानस्थल बन्ने विमानस्थल निर्माणका अभियान्ता डा‍. तारा जोशीको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा विमानस्थल नभएको एक मात्र जिल्ला हो। यहाँका सातवटै पहाडी र दुईवटा तराईका जिल्लामा विमानस्थल रहेको छ। तर, पूरै सुदूरपश्चिम जोड्ने एक मात्र जिल्ला डडेल्धुरामा भने विमानस्थल बन्न सकेको छैन । डडेल्धुरामा विमानस्थल बने यहाँका नागरिकको आय स्तरमा समेत बृद्धि हुने डा. जोशीको भनाइ छ। धनगढी नेपालगञ्जमा हुस्सुलगायतका कारणले उडान बन्द भए यहाँबाट उडान भर्न सकिने उनी बताउँछन्।
पहिलो पटक आएको टोलीले २०७२ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी अजयमेरुको पुईलेकमा सम्भाव्य स्थानका रुपमा सिफारिस गर्‍याे । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा लगाईयो र कन्सल्टेन्सीले डीपीआर निर्माण गर्‍याे । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारि गर्‍याे।
अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसँगै विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता भएको विमान स्थल निर्माणका अभियन्ता डा‍. तारा जोशीले बताएका छन्। विमानस्थलको निर्माण छिटोमा तीन वर्ष र ढिलोमा पाँच वर्ष लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।